ဒီဇိုင်း | KUMUDRA JOURNAL | Page 3
အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းများ (အရောင်း၊ အငှား)
ဖဲပြားဘောလုံးရွှေဖြူလက်ကောက် ဘောလုံးစက်ဖြတ်လေးတွေကို ဖဲပြားဒီဇိုင်းလေးကွင်းလေးနဲ့ အလှဆင်ထားတာပါ။ လူငယ်ဆန်ဆန်နဲ့ လှပလိုသူတွေ အကြိုက်တွေ့စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဆောင်ပဲပေးပေး၊ ကိုယ်တိုင်ပဲဝတ်ဝတ် အဆင်ပြေစေ တဲ့ ....
စကားပွင့်ဘယက်ကြိုး စကားပွင့်လေးတွေကို အကြီးအသေး အလိုက်စီထားပြီး ဘယက် ဒီဇိုင်းလေးဖော်ထားပါ တယ်။ လူကြီးလူငယ်မရွေး ဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့ ဒီဇိုင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်း ....
ရွှေတူ စားသောက်တဲ့ နှစ်ချောင်းတူ လေး ဖြစ်ပါတယ်။ အလှဆင်ပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် အမှန်တကယ်စားသောက်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ ပွတ်လုံးလေးတွေကို အောက်ဘက်မှာ ဗြောင်လုပ်ပေးထားပြီးလက်ကိုင်မှာတော့ ကနုတ်လေးတွေနဲ့ ....
ပန်းသုံးပွင့် ရွှေဖြူဘယက် ရွှေဖြူပန်းလေးသုံးပွင့်ကို ဘယက်ဒီဇိုင်းလေးဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ပန်းလေးတွေကနုတ်ဒီဇိုင်းလေးဆင်ထားတာ ကြောင့် ဂန္ထဝင်ဆန်ဆန်လှပနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဘေးမှာ ဘောလုံးစက်ဖြတ်လေးတွေနဲ့ ပြန်လည် ပုံ ဖော် ....
လိပ်ပြာဖုချိန်း ပြည်တွင်းမှာ အဝတ်များ တဲ့ ပုံစံလေးတွေနဲ့ ခွဲထွက်ပြီး ဒီဇိုင်းကို ဆန်း သစ်ထားပါတယ်။ ခြေကျင်းဝတ်လေးမှာ လိပ်ပြာလေးနားနေသ လို ....
မိုးစက်ပုလဲနားဆွဲ ဟောင်ကောင်ဆက်တင်နားဆွဲလေးကို မြိတ်ပုလဲ ရွှေရောင်လေးနဲ့ ဒီ ဇိုင်းဖော်ထားပါတယ်။ မြိတ်ပုလဲ အစစ်ကို အသုံးပြုပေးထားပြီး ခေတ်စားနေတဲ့ ဟောင်ကောင်ဆက်တင်လေးကြောင့်ခေါင်းလေးလုပ်လိုက်တိုင်း လင်းလက်နေမှာ ....
အသည်းဆိုင် စိန်ဆွဲသီး အသည်းလေးတွေကို ဆိုင်ထားပြီး အလယ်မှာ စိန်ပွင့်လေး မြှုပ်ထားပါတယ်။ ဖြူသန့်နီးပါး အရည်အသွေးရှိတဲ့ စိန်ပွင့်လေးခုနစ်ပွင့်ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ ခန့်မှန်းဈေးနှုန်း ....
သွပ်မိုးဖောင်းကြွပန်းဘယက် သွပ်မိုးဖောင်းကြွ ပန်းပွင့်လေးတွေကို သွယ်တန်း ပြီး ဘယက်ဒီဇိုင်းaလး ဖော်ထားတာပါ။ ပန်းပွင့်လေးတွေရဲ့ အောက်ဘက်မှာ လှုပ်သီးလေးတွေကို ထည့်ပေးထားတာကြောင့် လမ်းလျှောက်တိုင်း ....
ပန်းနွယ်ဟန်းချိန်း ပန်းနွယ်လေးတွေကို ချိတ်ဆက်ပြီး ဒီဇိုင်းဆန်း လေး ပုံဖော်ထားတာပါ။ ထသွားထလာပဲဖြစ်ဖြစ် ပွဲနေပွဲထိုင် ပဲဝတ်ဝတ်အဆင်ပြေမှာပါ။ ခန့်မှန်း ရွှေချိန် ခြောက်ပဲကျော်ရှိပြီး ....
သုံးသိန်းဝန်းကျင် တွင်းထွက် နီလာထည်လေးများ
စိန်နီလာပန်းပွင့်လက်စွပ် စိန်ခြယ်လေးကို နီလာလုံး ချောလေးတွေနဲ့ ပန်းပွင့်ပုံလေးဒီဇိုင်းဆင်ထားတာပါ။ စိန်ခြောက်ပွင့်၊ နီလာခြောက်ပွင့်ကို အသုံးပြု ထားပါတယ်။ စိန်အရည်အသွေး D.R. 0.2:3/8B ....
ငယ်ငယ်က ဓာတ်ပုံတွေကို ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်မှာတင်လို့ မိဘတွေကို တရားစွဲ September 22, 2016
ဒေါက်တာခင်စန္ဒီကျော်သေဆုံးမှု တရားဆက်လက်စွဲဆိုမယ်လို့အစ်မဖြစ်သူပြော September 27, 2016
သောက်စားမူးယစ်ဆူညံမှုတွေ ရပ်ကွက်တိုင်ကြားလို့သွားရောက် စစ်ဆေးတာလို့ တရားစွဲခံရတဲ့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြော October 3, 2016
တပ်မတော်ကနယ်မြေရှင်းနေချိန်မှာ လက်နက်ဝိုင်းလုခံရ October 10, 2016
ဘဏ်တိုးနှုန်းတွေလျှော့ချဖို့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေနဲ့ ဗဟိုဘဏ်ညှိနှိုင်းနေ September 27, 2016
© 2015-2018 Kumudra Journal (Myanmar). All rights reserved.